Mount Batukaru, Bali, Indonesia " Journey-Assist - mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Tendrombohitra Batukaru
Mount Batukaru (Gunung Batukaru)
Topimaso ny tendrombohitra Batukaru
Haavo - 2276m.
Volkano - lany tamingana
Ny faharetan'ny fiakarana - 5-8 ora (miankina amin'ny làlana)
Iray amin'ireo manintona voajanahary malaza indrindra any Bali izy io. Any amin'ny afovoan'ny nosy no misy azy, somary avaratra atsinanan'ny teboka ivon-toerana misy azy io. Manana haavo 2 276 m izy. Volkano efa lany tamingana miaraka amin'ny savaivony 12 km.
Ilay tendrombohitra sy ala, izay eo am-potony, dia ao amin'ny faritry ny tahiry nasionaly. Raha ny isan'ireo karazam-biby tsy manam-paharoa izay miaina ao aminy dia io tahiry io no iray amin'ireo voalohany any Indonezia. Biby sy vorona dia hita marobe eto. Manokana, misy vintana lehibe hihaonana gidro dia izay tsy matahotra olona mihitsy. Tsy mahagaga izany, satria vao nanomboka nitsidika an'i Batukara matetika ireo mpizahatany tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Fa na dia ankehitriny aza dia vitsy ihany izy ireo.
Ho an'ny mponina eo an-toerana, masina ity tendrombohitra ity. Eo amin'ny tehezan-tendrombohitra dia misy tranokalan'ny tempoly, iray amin'ireo tranainy indrindra eran'i Azia. Antsoina hoe Luhur Batukaru izy io ary naorina tamin'ny taonjato faha-11.
Mount Batukaru dia miorina ao amin'ny faritry Bedugul, izay feno natiora tsara tarehy fotsiny, fa koa ny lalan'ny tendrombohitra tery. Azonao atao ny miditra eto amin'ny fotoana fohy ihany avy amin'ny trano fisakafoanana Bali atsimo sy avy any avaratra. Fa avy any amin'ny faritra andrefana sy atsinanana amin'ny nosy dia haharitra ela kokoa vao tonga any.
Misy fomba telo hiakarana an-tampon'ity tendrombohitra ity:
Avy amin'ny tanànan'i Wangaya Gede. Ity lalana ity dia azo antsoina hoe tsara indrindra amin'ny resaka fitsitsiana fotoana sy ezaka.
Avy amin'ny tanànan'i Sanda. Ny dia sarotra indrindra sy lava indrindra, maharitra 6 ora.
Avy amin'ny tanànan'i Sarinbuana. Tsy dia lalana sarotra be, fa mitaky fotoana be - hatramin'ny 8 ora.
Noho ny fiakarana lava toy izany dia mazava ho azy fa tsy dia maro loatra ny olona te-ho any.
adiresy: Jl. Penatahan - Wongayagede, Wongaya Gede, Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali 85125, Indonesia
telefaonina: + 62 813-3823-6095 (Tempolin'i Luhur eo amin'ny Tendrombohitra Batukaru)
Tempoly eo amin'ny Tendrombohitra Batukaru. Luhur Batukaru
Mount Batukaru amin'ny sarintany